Kedu ka m si mara ihe draịvụ ike m nwere? Chọpụta site na aghụghọ a! | Akụkọ akụrụngwa
¿Etu esi amata ihe draịvụ ike m nwere? Ruo afọ ole na ole gara aga, ajụjụ a ga-adịrịrị mfe ịza, ebe ọ bụ na ọtụtụ kọmputa kọmputa na-eche naanị banyere ụdị disk diski IDE; N'ezie, ọnọdụ a bilitere ma ọ bụrụ na anyị nwere kọmputa nwere Windows, enwere ike inwe ụfọdụ ndịiche na Mac na ebe, onye ọrụ nwere ike ịhọrọ diski diski SCSI iji nweta oke ọsọ na nnyefe data.
N'oge a, ọ na-esiri anyị ike ịkọ banyere ụdị draịvụ ụdị IDE dị ka anyị tụrụ aro na paragraf bu ụzọ, ebe ha bụ dochie anya ndị ọzọ ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa, nke teknụzụ dị iche iche na ikike nchekwa dị ukwuu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere kọmputa na ịchọrọ inwe ụfọdụ ozi ndị ọzọ gbasara diski ike ahụ, mgbe ahụ anyị ga-akwado aghụghọ ole na ole yana, ụfọdụ ngwaọrụ ị nwere ike ịgba ọsọ iji nyochaa ozi a.
1 Etu esi amata ihe draịvụ ike m nwere na Windows
2 Pụrụ iche ọmụma banyere anyị ike draịva na Windows
2.1 Piriform Speccy na-ahụkarị
Etu esi amata ihe draịvụ ike m nwere na Windows
Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ na Windows, e nwere ụzọ dị mfe iji nwee ike nyochaa njirimara nke draịvụ ike anyị "n'ile anya"; Anyị anaghị ezo aka na "njikwa disk" kama ọ bụ "optimizer" nke otu. Yabụ na ị nwere ike itinye aghụghọ a, anyị na-atụ aro ka ị soro usoro ndị a:
Họrọ bọtịnụ Windows Malite site n’ala ala aka ekpe.
Na ọchụchọ na dee «-ebuli»(N’echiche na ị nwere sistemụ bekee nke Bekee). Ọ bụrụ na ị nwere ya na Spanish, chọọ «Ebuli nkeji»
Họrọ ngwaọrụ Windows site na nsonaazụ ndị egosiri.
Ozugbo windo ma ọ bụ interface nke ngwá ọrụ a ga-emeghe, nke na-abịa nke ga - enyere anyị aka ibute draịvụ ike anyị. Na-enweghị ịrụ ọrụ a (ọ bụ ezie na ịnwere ike iji ya n'oge ọ bụla ọzọ), n'elu interface ị ga-ahụ ndepụta nke draịvụ ike niile awụnyere na kọmputa nkeonwe.
Na njide ahụ nke anyị kwuru na mbụ, ị ga-enwe ike ịchọpụta draịva ike ndị a yana ebe, kọlụm nke abụọ na-egosi ụdị nke nke ọ bụla n'ime ha kwekọrọ. Anyị nwere ike ịchọpụta nke nwere teknụzụ SSD, ọ bụghị otu ọnọdụ maka ndị ọzọ edepụtara ebe ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịkọwapụta na ha nwere ike ịbụ nke ụdị S-ATA, ebe ọ bụ na ọ siri ike maka ụdị SSD ka biri na kọmputa na otu IDE.
Ugbu a na ị maara esi amata ihe draịvụ ike m nwere na Windows, anyị ga-ahụ ụzọ ndị ọzọ iji nweta ozi ndị ọzọ gbasara ụdị HDD ma ọ bụ SSD anyị.
Tọghata esịtidem draịva ka mpụga
Pụrụ iche ọmụma banyere anyị ike draịva na Windows
Aghụghọ ahụ anyị kwuru n’elu ga-enye anyị naanị ozi izugbe gbasara draịvụ ike anyị, nke ahụ bụ, ụdị teknụzụ na njikọta nke ha nwere ike iji n'ime usoro ha. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịchọpụta otu esi amata draịvụ ike m nwere na kọmpụta m iji nweta ozi ọkachamara na teknụzụ gbasara HDD ma ọ bụ SSD, anyị na-atụ aro ka ị jiri ngwaọrụ abụọ anyị ga-ekwupụta n'oge a
Piriform Speccy na-ahụkarị
Piriform Speccy na-ahụkarị Ọ bụ otu n'ime ha, nke ị nwere ike ibudata kpamkpam n'efu (ọ bụrụhaala na ịchọghị nkwado) site na weebụsaịtị ya. Mgbe ị na-agba ya na ngwa ọrụ interface, a ga-egosipụta draịvụ ike niile ejikọrọ na kọmputa gị.
Nseta ihuenyo nke anyị etinyebere na akụkụ nke elu na-egosi anyị nke ọ bụla n'ime draịvụ ike ndị a mana, ya na ozi puru iche; N'ebe ahụ ka anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ha abụrụ ụdị SATA na ọsọ mbufe ha nwere.
CrystalDiskInfo bụ ngwa ọzọ na-atọ ụtọ nke ị nwere ike iji kpamkpam n'efu; Site na ebe nrụọrụ weebụ na-ebudata ị nwere ike ịhọrọ n'etiti nsụgharị iji wụnye na Windows ma ọ bụ laptọọpụ, nke ikpeazụ bụ ihe kachasị atụ aro ka ị ghara ịhapụ ihe ndekọ nke iji ya n'ime Windows.
N’agbanyeghi ngwá ọrụ a na-enyekwa anyị ozi pụrụ iche, ma ọ dị obere nghọta karịa ihe ndị ahụ anyị kwuru n’elu nwere ike inye anyị. N'ebe a, anyị nwere ohere ịhụ ụdị diski ike anyị nwere, ọsọ ọgụgụ na ederede, arụmọrụ ya, ọnọdụ okpomọkụ ọ dị ugbu a, oge ọ nọ n'etiti ọtụtụ data ndị ọzọ.
Ihe ọ bụla ị chọrọ mgbe ọ bịara mara ihe dị mkpa banyere draịvụ ike gị, Nke ọ bụla n’ime ụzọ atọ ndị ọzọ anyị kwuru n’isiokwu a ga-aba ezigbo uru. Anyị nwere olile anya na ị kpebiela obi abụọ gị ma ị marala ka esi amata ihe draịvụ ike m nwere arụnyere na kọmputa.
Know mara ụzọ ndị ọzọ iji chọpụta? Ka anyị mara!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Kedu ka m si mara ihe draịvụ ike m nwere?
ọ dị mma m syrian. daalụ!
Ọ bụghị Roi dijo
Roi juru ya anya
Zaghachi Abụghị Roi
Ihe ngosi 3 nke Tesla nwere ike ịbụ nke gị site na $ 35.000
SpaceX enweworị Falcon Heavy nke mbụ ya